Multilingual Bible: Nepali New Revised Version, Ezekiel 31
Nepali New Revised Version, Ezekiel 31
1 एघारौँ वर्षको तेस्रो महिनाको पहिलो दिनमा परमप्रभुको यो वचन मकहाँ आयो:
2 “हे मानिसको छोरो, मिश्रदेशको राजा फारो र त्‍यसका सैन्‍य-दलहरूलाई भन्‌: “ ‘तेरो वैभवमा तँलाई कोसित तुलना गर्न सकिन्‍छ?
3 अश्‍शूर देशलाई हेर्‌, लेबनानमा त्‍यो एउटा देवदारु नै थियो, जसका सुन्‍दर हाँगाहरूले वनलाई ढाकिराखेका थिए। रूखहरूका हाँगाबिँगाका बीचबाट त्‍यसको टुप्‍पो अल्‍गो बढ़ेर त्‍यो निस्‍केको थियो।
4 पानीको मूलले त्‍यसलाई पोषण गर्‍यो। गहिरा-गहिरा पानीका स्रोतहरूले त्‍यसलाई अल्‍गो पारे। तिनका वरिपरिका खोलाहरूले त्‍यसलाई भिजाइदिए, र तिनको नदीले मैदानका सबै रूखहरूलाई भिजाए।
5 यसरी मैदानका सबै रूखहरूमा त्‍यो सबैभन्‍दा अल्‍गो भयो। पानी प्रशस्‍त भएको कारण त्‍यसका हाँगाबिँगा धेरै भए, र ती फैलिएर गए।
6 त्‍यसका हाँगाहरूमा आकाशका सबै पन्क्षीहरूले आफ्‍ना गुँड़ बनाए। त्‍यसका हाँगाहरूमुनि वनका सबै पशुहरूले आफ्‍ना बच्‍चा जन्‍माए। त्‍यसका छायामुनि सबै ठूला-ठूला जातिहरू आएर बसे।
7 फैलिएका लामा-लामा हाँगाहरू भएको त्‍यो एउटा शोभायमान वृक्ष थियो, किनकि त्‍यसका जराहरू प्रशस्‍त पानीतिर फैलिए।
8 परमेश्‍वरका बगैँचाको कुनै देवदारुले पनि त्‍यसको दाँजो गर्न सक्‍दैनथ्‍यो, न त कुनै सल्‍लाको रूख त्‍यसका हाँगाबिँगासित तुलना गर्न सकिन्‍थ्‍यो, न त चिनारका रूखहरू त्‍यसका हाँगाहरूसित मिलान गर्न सकिन्‍थे। परमेश्‍वरका बगैँचाको कुनै पनि रूखले त्‍यसका सुन्‍दरताको दाँजो गर्न सक्‍दैनथ्‍यो।
9 फैलिएका प्रशस्‍त हाँगाहरूले पूर्ण पारेर मैले नै त्‍यसलाई सुन्‍दर पारें, र परमेश्‍वरको बगैँचामा अदनका सबै रूखहरूले त्‍यसलाई डाहा गर्थे।
10 “ ‘यसैकारण परमप्रभु परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्‍छ: त्‍यो त्‍यति अल्‍गो भएको, र त्‍यसको टुप्‍पालाई त्‍यसले हाँगाबिँगाका बीचबाट छिचलेर गएको कारण आफ्‍नो अल्‍गाइमा त्‍यो घमण्‍डले फुल्‍यो।
11 यसैकारण त्‍यसको दुष्‍ट्याइँअनुसारको उचित व्‍यवहार गरोस्‌ भनेर मैले त्‍यसलाई जातिहरूको शासकका हातमा दिएँ। मैले त्‍यसलाई एकातिर फालिदिएँ।
12 अनि सबैभन्‍दा क्रूर विदेशी जातिहरूले त्‍यसलाई ढालेर छोड़िदिए। त्‍यसका हाँगाबिँगा पहाड़हरू र सबै बेँसीहरूमा ढले, र त्‍यसका हाँगाहरू देशका सबै खोलाहरूमा भाँचिएर पड़िरहे। पृथ्‍वीका सबै जातिहरू त्‍यसका छायाबाट निस्‍के र त्‍यसलाई छोड़े।
13 ढलेको त्‍यस रूखमा आकाशका सबै पन्क्षीहरू बसे, र त्‍यसका हाँगाहरूका माझमा वनका सबै पशुहरू थिए।
14 यसकारण फेरि कहिल्‍यै पानीको छेउमा उम्रेका कुनै पनि रूखहरू यति अल्‍गा घमण्‍डसाथ बढ्‌नेछैनन्‌। बाक्‍ला हाँगाबिँगाका बीचबाट छिचलेर तिनीहरूका टुप्‍पाहरू बढ़ेर माथि निस्‍कनेछैनन्‌। प्रशस्‍त पानी पाएका अरू कुनै रूखहरू यति अल्‍गो उचाइसम्‍म पुग्‍न पाउनेछैनन्‌? तिनीहरू सबै मृत्‍युकै लागि, तल पृथ्‍वीको लागि नियुक्त गरिएका छन्‌। मरणशील मानिसहरूजस्‍तै, तिनीहरू मृत-लोकमा जानेहरूसित जानेछन्‌।
15 “ ‘परमप्रभु परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्‍छ: जुन दिन त्‍यो चिहानमा लगियो, त्‍यस दिन त्‍यसको लागि शोक गर्नलाई गहिरा स्रोतहरू मैले बन्‍द गरिदिएँ। मैले त्‍यसका खोलाहरू थुनिदिएँ, र त्‍यसका प्रशस्‍त पानीहरू रोकिए। त्‍यसैको कारण मैले लेबनानलाई शोक पहिर्‍याइदिएँ, र वनका सबै रूखहरू ओइलाए।
16 जब मैले त्‍यसलाई मृत-लोकमा जानेहरूसँग चिहानमा झारिदिएँ, तब मैले जाति-जातिहरूलाई त्‍यो लोटेको आवाजले थर्काएँ। तब अदनका सबै रूखहरू, लेबनानका सबैभन्‍दा मन पर्ने र असल रूखहरू प्रशस्‍त पानी पाएका सबै रूखहरूले पृथ्‍वीमुनि सान्‍त्‍वना पाए।
17 त्‍यसका छायामा बस्‍नेहरू, अर्थात्‌ जाति-जातिहरूमध्‍येका मित्रराष्‍ट्रहरू पनि तरवारले मारिएकाहरूसँगसँगै चिहानमा मिल्‍न गएका थिए।
18 “ऐश्‍वर्य र वैभवमा अदनका रूखहरूमा अरू कुन रूख तँसित तुलना गर्न सकिन्‍छ? तापनि तँ पनि अदनका रूखहरूसितै पृथ्‍वीको तलतिर झारिनेछस्‌। तँ पनि खतना नभएकाहरूसित, तरवारले मारिएकाहरूसँग पड़िरहनेछस्‌। “ ‘योचाहिँ फारो र त्‍यसका सबै सैन्‍य-दलहरू हो, परमप्रभु परमेश्‍वर भन्‍नुहुन्‍छ’।”
Ezekiel 30 Choose Book & Chapter Ezekiel 32